Marasha anogocha: hunhu, mashandisiro uye zvakanakira | Green Renewables
Kana iwe uri kufunga nezve kutenga bhengi remunda wako kana rebindu rako, zvirokwazvo une kusahadzika. Pane misiyano pakati pe marasha anopisa kana gasi. Kune mhando dzakasiyana uye imwe neimwe ine hunhu hwakakosha. Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kusarudza kana isu tichida inotakurika bhengi kana yakagadziriswa imwe. Zvinoenderana nezvatinazvo mubindu kana mumunda medu.
Naizvozvo, tiri kuzotsaurira chinyorwa ichi kukuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvemarasha emabharuki uye hunhu hwavo.
1 Ndeipi bhengi yandinofanira kushandisa
2 Musiyano uripo pakati pemarasha uye gasi bharuki
2.1 Hunhu hwemarasha bharuki
2.2 Zvimiro zvegaba rekubheka
Ndeipi bhengi yandinofanira kushandisa
Kana tichida kuisa bhayiki munda wedu webindu, hapana panikiro. Imwe yadzo ndeyekuti kana tichifanira kuvaka bhaaji yezvidhinha, kutenga chero chakagadzirirwa uye gasi rinotakurika kana marasha bhayiki. Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kusarudza kana izvo zvatinoda iri laptop kana yakagadziriswa. Zvichienderana nerudzi rwenzvimbo yatinayo mubindu redu, tinogona kufarira gaba rakagadzirwa kana zvidhina. Mune zviitiko izvi inobata nemarasha emhepo akazaruka. Ndokunge, apa tichave nekuparara pamativi ese ekupisa neutsi. Izvi zvinoita kuti tishandise mafuta akati wandei kupfuura mabharuki anofamba.
Nhare mbozha dzinopa mukana wekuva nechivharo chekuvhara choto. Kana zviri zvekuravira, hauzoone mutsauko kana uchibika mune imwe kana imwe. Misiyano inongokosheswa zvichienderana nerudzi rwemafuta aunoshandisa. Kana iwe ukashandisa marasha, gasi kana huni barbecues, iwe unenge uine imwe flavour mune yega yega. Ngatione kuti ndeupi musiyano mukuru uripo pakati pemarasha uye gasi bharuki.
Musiyano uripo pakati pemarasha uye gasi bharuki
Kana iwe wakasarudza yenyuchi barbecue, inguva yekufunga kana isu tichizotenga iyo yakavharwa imba kana kwete. Izvo zvinodawo kuziva mhando yemafuta ayo atinozowedzera. Zvinotarisirwa kuti usarudze iyo inogocha iyo imba inogona kuvharwa. Uye ndezvekuti mumhando iyi yemabhawa tinogona kuchengetedza mafuta akawanda uye tinobika chikafu nekukurumidza. Mumabharuki ayo asina chifukidziro pane kurasikirwa kukuru kwekupisa, saka chikafu chinotora nguva yakareba kuti chibikwe. Iyo tambo inosiyanawo neimwe nzira.
Ngatione kuti ndedzipi hunhu hwemarasha anogocha.
Hunhu hwemarasha bharuki
Izvo zviri izvo zvakapusa uye zviri nyore kushandisa pane izvo zvegesi. Uye zvakare, kana tichitenga, kana chisiri chinhu chatichazoshandisa kazhinji, tinogona kufunga kuti zvakachipa kwazvo. Kana isu tisingazoshandise mabharuki pakuungana kwemhuri kuti tizvishandise kazhinji, Hatisi kufarira kutenga bhengi ine mutengo wakakwira. Tichatsvaga yakachipa nzira yeku "kubuda mumatambudziko".
Kana zvasvika pakubika iri rimwe dambudziko.Mazimbe emabharuki anonyanya kuomarara kusvika patembiricha yakakwana kuti ubike chikafu zvakanaka. Pamabharuki egesi, zviri nyore kwazvo kusvika kune tembiricha dzinodiwa nechikafu. Mune iwo ehuni kana marasha isu tinofanirwa kushandisa yakawanda nguva kuti tikwanise kuzadzikisa kuti marasha ane tembiricha yakakwira zvakakwana kuti tikwanise kupfuudza chikafu zvakanaka.
Carbon kana huni barbecues inogona kuva nengozi kudarika gasi bhangi pakutanga. Uye ndezvekuti chero marasha anogona kusvetuka kubva pamba ndokukonzera moto. Kune izvi, iyo nzvimbo kwatinoenda kugonesa iyo barbecue inofanira kuve yakagadzirirwa iyo. Ndokunge, isu tinofanirwa kuzvichengeta kubva kune chero huswa hwakaoma kana tiine gadheni. Zvirinani kuiisa munzvimbo ine pasi rekugadzira uko pasina njodzi yemoto.
Kana tangopedza kugaya chikafu, marasha magaba ane basa rakakura rekugona kubvisa marasha akatsva. Tinogona kutaura kuti mhando iyi yemabhaguki yakasviba uye ine basa rakakura rekugadzirisa.
Zvimiro zvegaba rekubheka
Kazhinji, mhando iyi yemabhaguki inogara iine chifukidziro chekudzivirira kuti marimi arege kudzima nekuda kwemhepo. Izvi zvinobatsira kuwedzera kushanda zvakanaka kana uchibika chikafu. Mabhasiketi egasi anosvika pane yakakwana tembiricha yekubika chikafu nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvakapfuura. Izvi zvinoita kuti ikurumidze uye ibudirire. Mabhasiketi egasi haashandise marasha, saka akachengeteka kubva pakuona kwerudzi rupi zvaro rwemoto hunogona kukonzeresa kunze kwemusha nekuda kwechikonzero ichocho.
Hezvino zvimwe zvinhu zvekuchengetedza mupfungwa. Njodzi yemarasha inogocha zvinoenderana nemhando yekushandisa yatiri kupa. Kana tikasangwarira pakuisa bhengi munzvimbo isiri yengozi, zvakajairika kuti pangave nenjodzi. Zviri kwatiri kuti isu tinokwanisa kushandisa imwe mhando yebhayiko kana imwe.
Kana ari iwo mutengo, isu tinogona kutaura kuti gasi mabhekesi ari kudhura sezvo iwo akaomesesa. Zvinoenderana nerudzi, modhi uye kuomarara kwenzvimbo yemoto zvakanyanya pane mafuta. Tinogona kuwana gasi bharuki nemitengo yakaderera kwazvo. Zvisinei, zvese zvinoenderana nekushandisa kwatichaenda kupa mumwe nemumwe wavo.
Tinofanira kuziva kuti zvinoenderana nekushandisa kwatichapa bhengi, kana chiri chinhu chinowanzoitika kana kuti kwete, tinogona kufarira imwe kana imwe. Kana chiri chinhu chatichazoshandisa kwechinguva chipfupi, zvinokurudzirwa kuwana marasha ekugocha. Izvi zvinodaro nekuti zvakachipa uye zviri nyore kushandisa. Kunyangwe vaine zvishoma zvekuchengetedza, kana kushandiswa kwavo kusiri kwenguva refu uye kazhinji, uku kugadzirisa kuchiderera. Nezve njodzi, zvinoenderana nenzvimbo yatinozoisa. Zvakanaka, tsvaga gomba mubindu umo musina huswa hwakaoma uye pasina njodzi yemoto kubva mukusvetuka kwemazimbe.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda pamusoro pemarasha emabharuki, hunhu uye zvakanakira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Marasha anobhabhiwa